ट्यूमरविरुद्ध लड्दै इरफान खान, पाँचौ कीमोथेरापी गर्दा निकै कमजोर भए ! - Koshi Online
ट्यूमरविरुद्ध लड्दै इरफान खान, पाँचौ कीमोथेरापी गर्दा निकै कमजोर भए !
विराटनगर, साउन २५, बलिउड अभिनेता इरफान खान पछिल्लो समय न्यूरोएंडोक्राइन टयूमरसँग लडिरहेका छन् । इरफान खानले लगभग आफ्नो रोगलाई जितिसकेका छन् । २/४ दिनपछि इरफानले छैटौं एवं अन्तिम कीमो हुँदैछ ।
स्मरण होस् कि कीमोथेरापी गरेपछि क्यान्सर ठीक हुने सम्भावना ७०–८० प्रतिशत हुन्छ । इरफान आफ्नो यस लडाइंमा एकदमै कसरतका साथ लड्दैछन् । पाँचौ कीमोथेरापीपछि उनलाई धेरै कमजोरी महसूस भएको थियो । यसक्रममा उनलाई १०–१५ दिनका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । कीमोपछि बिरामीलाई बान्ता आउने, कपाल झर्ने र कमजोरी लगायतका लक्षण देखिन्छ ।
छैटौं कीमोपछि उनलको पेटको स्क्यान गरिनेछ । जसमा क्यान्सर कति कम भयो भन्ने बारे पत्ता लाग्ने छ । खबरका अनुसार अब इरफान पूरै ठिक भएर मात्र भात फिर्नेछन् ।
इरफानलाई छ महिनाअघि मात्र यस बारेमा थाहा भएको हो । यसअघि उनी उपचारका लागि लण्डन गएका थिए । उनले यसबारे थाहा भएपछि भनेका छन्, ‘केही महिनाअघि मलाई अचानक थाहा भयो की म न्यूरोएन्डोक्राइन क्यान्सर ग्रसित छु । यस शव्द मैले पहिले कहिल्यै सुनेको थिइँन ।’
सोनाक्षीका साथमा बलिउडमा डेब्यू गर्दै चर्चित र्‍यापर बादशाह
वर्षा र सञ्जोगले गरे इंगेजमेन्ट, ‘भ्यालेन्टाइन डे’को दिन लगनगाँठो कस्ने
कठोर हृदय पगाल्ने ‘मुनामदन’
पूर्वप्रेमी हिमांशलाई सम्झँदै नेहा कक्कडले गाइन् यस्तो गीत (भिडियोसहित)
गुरुकुलमा मंगलबारदेखि ‘मुनामदन’
विवाहै नगरी आमा बनिन् एकता कपुर